Fannaanad 'ay indhaheeda u sababeen in loo geysto weerar faroxumeyn ah' - BBC News Somali
Fannaanad 'ay indhaheeda u sababeen in loo geysto weerar faroxumeyn ah'
Image caption Booliska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay ay u suurtagashay inuu soo dhaweysto waxyaabaha ay indhaha fannaanadda hayeen, si uu ugu ogaado meesha ay joogtay
Nin u dhashay waddanka Japan oo khabiir ku ah cilmiga dhinaca tiknoolojiyadda iyo internet-ka ayaa ayaa lagu eedeeyay inuu weerar faroxumeyn ah u geystay fannaanad da' yar.
Eedesanaha ayaa isagoo booliska u sharraxaya sida uu gabadhan ku helay sheegay inuu adeegsaday sawir ay leedahay, kasoo uu goobta ay joogtay ka ogaaday muuqaalka ay muraayad ahaanta usoo celinayeen indhaheeda, sida ay waraahinta maxalliga ah soo tabiyeen.
Haddii si kale loo dhigo, sawirkeeda ayuu soo dhaweystay wuxuuna indhaheeda ka dhex arkay muuqaalka horteeda ahaa, sidaasna wuxuu ku baaray goobta ay ku sugneyd, isagoo adeegsaday khibraddiisa dhinaca tiknoolojiyadda iyo aqoonta uu u leeyahay magaalada.
Ninkan ayaa sheegay in muuqaalka uu gabadha indhaheeda ka dhex arkayay uu ka gartay boosteejo tareen oo ay ku sugneyd marka ay sawirka ay iska qaadday soo dhigeysay baraha bulshadsa.
26 jirkan ayaa markaas ka dib xarunta tareenka agteeda ku sugay gabadha, wuxuuna u daba raacay gurigeeda marka ay kasoo baxday goobtaas, sida ay boolisku sheegeen.
Kiiskan ayaa abuuray dood xoog leh oo ku saabsan sida ay bulshada u saameynayaan ficillada ay sameeyaan burcadda internet-ka.
Ninkan la tuhunsanyahay, oo ay boolisku magaciisa ku sheegeen Hibiki Sato, ayaa lagu eedeeyay inuu haweeneyda fannaanadda ah u raacay gurigeeda habeenkii ay taariikhdu ahayd 1-dii bishii September, markaas ka dibna uu weerarka ku qaaday.
Ka dib markii xabsiga loo taxaabay dabayaaqadii isla bishaas, wuxuu booliska u sheegay inuu taageere weyn u ahaa haweeneydaas, oo ay warbaahinta maxalliga ah ku qeexeen fannaanad 21 jir ah "oo ay dadka reer Japan oo dhan jecelyihiin".
Wuxuu eedeysanuhu sheegay in markii uu soo dhaweystay sawirka indhaheeda ka muuqday uu adeegsaday khariidadda waddooyinka ee Google-ka, markaasna uu helay boosteejada tareenka ee ay joogtay.
Waxaa kale oo uu sheegay inuu si cilmiyeysan u daawaday muuqaallo ay fannaanaddu iska duubtay iyadoo joogta gurigeeda, sidaasna uu ku aqoonsaday qeybta ay ka dagantahay guriga dabaqa ah.
Kiiskan ayaa dhaliyay qeylo dhaan laga muujinayo amni darrada ka dhalan karta sawirrada tayada wanaagsan leh ee ay dadka soo galiyaan baraha bulshada.
"Sawirrada ay tayadooda muuqaalka sarreyso waxay sahlayaan in qofka lagu soo bartilmaameedsado goobta uu ku sugan yahay, waxaana taas sii fududeynaya horumarka dhinaca tiknoolojiyadda laga gaaray iyo tilmaamaha laga tix raaci karo khariidadda Google-ka, qof walbana waa la heli karaa meesha uu joogo", sidaas waxaa BBC-da ku yiri Eliot Higgins, oo ah aqoonyahan abuuray bog baaritaannada tiknoolojiyadda lagu sameeyo.
"Xitaa macluumaadka ugu yar ee ka muuqda sawirrada iyo muuqaallada ayaa horseedi kara in wax walba la ogaado", ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Dalka Japan ayey sanadihii lasoo dhaafay ka dhaceen weerarro ay dad taageerayaal ah u geysteen haween fannaaniin ah.
Sanadkii 2016-kii, fannaanadda reer Japan ee lagu magacaabo Mayu Tomita ayaa dhaawac xun loo geystay ka dib markii sida lagu soo warramay uu qof taageere u ahaa toorri la dhacay iyadoo masrax ku yaalla magaalada Tokyo bandhig ka sameyn rabta. Waxaa sanadkan lagu soo warramay inay dowladda ka gudbisay dacwad ka dhan ah, ayna ku eedeyneyso inay amaankeeda sugi weysay.
Fannaanad kale oo lagu magacaabo Maho Yamaguchi ayaa sanadkan gudihiisa goob fagaare ah ka sheegtay inay weerar u geysteen labo taageere oo ku xadgudbay.
Shuichiro Hoshi, oo ah barfasoor cilmiga amniga shacabka ka dhiga jaamacadda magaalada Tokyo ayaa warbaahinta u sheegay in horumarka laga sameeyay sawirrada lagu qaado taleefannada casriga ah ay sare u qaadeen halista ku saabsan in la ogaado macluumaadka khaaska ah ee dadka.